KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Myanmar Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
SƐ WODURU Hiroshima kuro mu wɔ Japan, na wokɔ Motoyasu Asubɔnten no ho a, wobɛhunu sɛ ɛdan bi a agogo si nsuo no kokoɔ so wɔ apueeɛ fam. Afe 1945 mu tɔnn na ɛdan yi gogoeɛ. Mfie pɔre pɔre 70 atwam. Adɛn nti na wɔnsan nsii dan no?
Saa aborosan a ɛtoa so mmiɛnsa no, wɔsi wiee afe 1915. Ɛhɔ na na adwadifoɔ de wɔn nneɛma kyerɛ, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a adwadie bɛkɔ so. Nanso August 6, 1945, anɔpa 8:15 na biribiara sesaeɛ. Saa berɛ no na wɔtoo atɔmik bɔmb a ɛdi kan wɔ ɛko mu. Bɔmb no paeeɛ no, ɛkɔɔ wiem sorosoro bɛyɛ anammɔn 1,800 (mita 550); ɛkaa kakraa bi sɛ ɛdwirii dan no nyinaa guiɛ. Ɛkaa tenten a ɛsi mfimfini no nko ara. Nnipa a ɛwɔ dan no mu nyinaa wuwuiɛ.
Ɛdan a ɛka sii hɔ no, wɔanyɛ ho hwee; ɛsi hɔ saa. UNESCO * bɔɔ amanneɛ sɛ, “ɛyɛ ahyɛnsodeɛ tenten kɛseɛ bi a ɛma yɛkae awudie kɛseɛ a ɛsene biara a akɔ so wɔ nnipa asetenam.” Afe 1996 mu no, UNESCO de dan no kaa nneɛma akɛseɛ a asisi wiase no ho; wɔfrɛ no Hiroshima Peace Memorial.
Deɛ ɛyɛ ya ne sɛ awerɛhosɛm yi nyinaa akyi no, akokoakoko nnyaeeɛ. Nneɛma a ɛkɔfa akokoakoko ba ne adufudepɛ, ɔman ho dɔ, abusua ne nyamesom ho tan. Enti akokoakoko yi, ɛbɛkɔ so saa?
Bible ma yɛhunu sɛ ɛnte saa koraa! Dwom 46:9 ka sɛ: ‘Onyankopɔn ma akodie gyae kɔsi asase ano. Ɔbubu agyan mu, na ɔtwitwa pea mu asinasini; ɔde gya hye nteaseɛnam.’ Ɛnyɛ ɛno nko. Onyankopɔn bɛyi nnipa nnisoɔ nyinaa afiri hɔ, na ɔde aban baako pɛ adi wiase nyinaa so. Saa aban no ne Onyankopɔn Ahennie; ɛso hene ne Yesu Kristo a ne mmrane ne “ahemfo mu Hene” no.—Adiyisɛm 11:15; 19:16.
Saa aban no ba a, ɛho renhia sɛ yɛbɛyɛ biribiara de akae ɛko biara bio. Yesaia 65:17 ka sɛ, “Wɔrenkae kane nneɛma no bio, na ɛremma akomam bio.” “Kane nneɛma no,” kyerɛ sɛ, ɔhaw ne amanehunu a ɛwɔ hɔ nnɛ nyinaa bɛtu ayera.
^ nky. 4 Amanaman Nkabom Kuo Nkorabata a ɛhwɛ Nwomasua, Nyansahu, ne Amammerɛ So.